Mugabe to address Zimbabwe as end of his presidency nears - CNA
File photo of Zimbabwe's President Robert Mugabe on May 23, 1991 at 10 Downing Street in London. (Johnny EGGITT/AFP)
20 Nov 2017 01:45AM (Updated: 20 Nov 2017 01:50AM )
HARARE: Zimbabwe's President Robert Mugabe was on Sunday (Nov 19) facing the end of his 37-year rule, as he prepared to address the nation after the ZANU-PF party sacked him as its leader and told him to resign as head of state.
War veterans leader Christopher Mutsvangwa (centre) celebrates the dismissal of Robert Mugabe as president of the ruling ZANU-PF party in Harare. (Jekesai NJIKIZANA/AFP)
File photo taken on Jan 7, 2017 shows Zimbabwe acting President Emmerson Mnangagwa (centre). (Jekesai NJIKIZANA/AFP)
The factional succession race that triggered Zimbabwe's sudden crisis was between party hardliner Mnangagwa - known as the Crocodile - and a group called "Generation 40", or "G40", because its members are generally younger, which campaigned for Grace's cause.